ဆရာမချင်းချင်းပက်ထန်းနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း| ဆရာမခငျြးခငျြးပကျထနျးနဲ့ တှဆေုံ့မေးမွနျးခွငျး - THE CHINLAND POST
ဆရာမချင်းချင်းပက်ထန်းနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း| ဆရာမခငျြးခငျြးပကျထနျးနဲ့ တှဆေုံ့မေးမွနျးခွငျး
Chin Chin Pekthang/The Chinland Post
Salai Josephbawi| 2020 March 10| မိတျဆကျ- ဆရာမခငျြးခငျြး ပကျထနျးဟာဆိုရငျ ခငျြးငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ ပွနျလညျညီညှတျရေးအတှကျ စှမျးစှမျးတမံအကြိုး ဆောငျနသေူဖွဈပွီး၊ ညီနောငျတိုငျးရငျးသားမြားပါတီ (NDF)၏ မနျနဂြော၊ ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး၏ ငွိမျးခမျြးရေးဖျောဆောငျမှုမှာ ပံ့ပိုးကူညီနသေူတဈယောကျဖွဈပါသညျ။
၁။ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျမှာ အမြိုးသမီးမှုတှရေဲ့ ပါဝငျမှုရတဲ့အပိုငျးက ဘယျလောကျထိ ခရီး ပေါကျနပွေီလဲ? ဆရာခငျြးခငျြးပကျထနျး- ကမြတို့နိုငျငံမှာ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျဟာ ၂၀၁၁ကနစေခဲ့တယျ။ ဘာဖွဈလို့ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျကိုစလဲဆိုရငျ နှဈပေါငျး (၇၀)ကြျော ပွညျတှငျးစဈနဲ့ရငျဆိုငျခဲ့ရလို့ပဲဖွဈပါတယျ။ အခုခြိနျမှာ သမ်မတဦးသိနျးစိတျခတျေက သျောလညျးကောငျး၊ အခု NLD အစိုးရမှာလညျး ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျကို သှားနတေယျ။ ဒါပမေယျ့ ကမြတို့မြှျော လငျ့သလိုတော့ အမြားကွီးတော့ ခရီးတော့မရောကျသေးပါဘူး။
(၂)ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျမှာ အမြိုးသမီးတှရေဲ့အခနျး ကဏ်ဍက ဘယျလောကျထိ အရေးကွီးပါသလဲ? ကမြတို့အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍကတျောတျောလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ ကမြတို့အမြိုးသမီးတှကေ တကယျ့တကယျ ပွညျတှငျးစဈမှာ အခကျအခဲကွုံတဲ့အခါမှာ ဘယျမှာမဆို အမြိုးသမီးသညျက နဈနာသူနဲ့ခံစား သူက အရမျးမြားပါတယျ။ အဲတော့ ဒီငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျလို့ ကမြတို့ပွောတဲ့အခါမှာ အမြိုးသမီးထုကလညျး ကမြတို့ အားပေးဖို့ ကူညီဖို့လိုအပျပါတယျ။ တဈခါတလေ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျလို့ ပွောတဲ့အခါမှာ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျနှငျ့ အစိုးရနှငျ့ တပျမတျောနဲ့ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးတာသညျရှိပါတယျ။ သူတို့မှာပဲတာဝနျရှိတာမဟုတျဘဲနဲ့ ကမြတို့ပွညျသူလူထုကလညျး ပူးပေါငျးပွီးတော့မှ ဒီငွိမျးခမျြးရေးအောငျမွငျ ဖို့အတှကျက အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။
(၃)ခငျြးအမြိုးသမီးတှကေိုရော ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျမှာ ပါဝငျဖို့အတှကျ ဘယျလိုတိုကျတှနျးခငျြပါသလဲ? အထူးသဖွငျ့ ကမြဒီနေ့ ပွောခငျြတာကတော့ ခငျြးအမြိုးသမီးတှကေ အမြားကွီး ဒီငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျမှာ ပါဝငျဖို့လိုအပျတယျ။ ခငျြးအမြိုးသားတပျဦးကပဲ တာဝနျရှိတယျလို့မယူဆ ပဲနဲ့ ပူးပေါငျးပါဝငျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အလုပျရုံဆှနှေေးပှဲတို့ ကျောမတီတှမှော အမြိုးသမီးပါဝငျမှုမြားလာရငျ ကမြတို့ အမြိုးသမီးထုရဲ့ လုံခွုံရေး၊ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျက ပိုပွီး အားကောငျးမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ခငျြးအမြိုးသမီး ထုအနနေဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျမှာ ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ဖကျကနေ အားလုံးပါဝငျပေးဖို့မတ်ေတာရပျခံလိုပါတယျ။
Chin Chin Pekthang Interview Youtube https://youtu.be/rMWvi-OtoVQ
Salai Josephbawi| 2020 March 10|
မိတ်ဆက်- ဆရာမချင်းချင်း ပက်ထန်းဟာဆိုရင် ချင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်ညီညွတ်ရေးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံအကျိုး ဆောင်နေသူဖြစ်ပြီး၊ ညီနောင်တိုင်းရင်းသားများပါတီ (NDF)၏ မန်နေဂျာ၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုမှာ ပံ့ပိုးကူညီနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ အမျိုးသမီးမှုတွေရဲ့ ပါဝင်မှုရတဲ့အပိုင်းက ဘယ်လောက်ထိ ခရီး ပေါက်နေပြီလဲ? ဆရာချင်းချင်းပက်ထန်း- ကျမတို့နိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဟာ ၂၀၁၁ကနေစခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုစလဲဆိုရင် နှစ်ပေါင်း (၇၀)ကျော် ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိတ်ခေတ်က သော်လည်းကောင်း၊ အခု NLD အစိုးရမှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို သွားနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့မျှော် လင့်သလိုတော့ အများကြီးတော့ ခရီးတော့မရောက်သေးပါဘူး။
(၂)ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်း ကဏ္ဍက ဘယ်လောက်ထိ အရေးကြီးပါသလဲ? ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကတော်တော်လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေက တကယ့်တကယ် ပြည်တွင်းစစ်မှာ အခက်အခဲကြုံတဲ့အခါမှာ ဘယ်မှာမဆို အမျိုးသမီးသည်က နစ်နာသူနဲ့ခံစား သူက အရမ်းများပါတယ်။ အဲတော့ ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်လို့ ကျမတို့ပြောတဲ့အခါမှာ အမျိုးသမီးထုကလည်း ကျမတို့ အားပေးဖို့ ကူညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်လို့ ပြောတဲ့အခါမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်နှင့် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာသည်ရှိပါတယ်။ သူတို့မှာပဲတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျမတို့ပြည်သူလူထုကလည်း ပူးပေါင်းပြီးတော့မှ ဒီငြိမ်းချမ်းရေးအောင်မြင် ဖို့အတွက်က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
(၃)ချင်းအမျိုးသမီးတွေကိုရော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုတိုက်တွန်းချင်ပါသလဲ? အထူးသဖြင့် ကျမဒီနေ့ ပြောချင်တာကတော့ ချင်းအမျိုးသမီးတွေက အများကြီး ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးကပဲ တာဝန်ရှိတယ်လို့မယူဆ ပဲနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်ရုံဆွေနွေးပွဲတို့ ကော်မတီတွေမှာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုများလာရင် ကျမတို့ အမျိုးသမီးထုရဲ့ လုံခြုံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်က ပိုပြီး အားကောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ချင်းအမျိုးသမီး ထုအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ အားလုံးပါဝင်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
Previous Pi Lalhmangaihzuali Interview on Women Participation in Peace Process
Next COVID-19 Ruang Hakha Kawl Titoih Puai Tuah Lo Dingin Ramkulh Cozah Nih A Kham